ရောက်တတ်ရာရာဖတ်ကြည့်ပါ..........။။ ကျွန်တော်တို့တွင်...မြန်မာကွ......ဟုကြွေးကြော်စရာများအားသိရှိသမျှတင်ပြတော့အံ့...............။။။။။။။။။ ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်တွင်စက်မှုလုပ်ငန်းများတိုးတက်လျှက်ရှိရာတွင်...ေ၇စုပ်စက်မှ ရေပိုက်လုံးအား ခုံဖိနပ်သဲကြီုးအဖြစ် ပြောင်းလဲထုတ်လုပ်သော အသေးစားလုပ်ငန်းမှသည် ပြည်တွင်းထုတ် နိုင်ငံခြားကားများကိုလည်းထုပ်လုပ်လျှက်ရှိရာတွင်....ယင်းကားများအားသံချေးမတက်သောနေရာအား
သံချေးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း...အကောင်းအတိုင်းရှိသောနေရာအား အပေါက်ဖြစ်အောင်ဖေါက်ကာ ဂဟေပြန်ဆက်လျှက် အစုတ်ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်(အစုတ်ပုံစံပေါက်မှသာယာဉ်မှတ်ပုံတင်ထုတ်ပေးသောကြောင့် ) သော အကောင်းမှအစုတ်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်နိုင်သောအတတ်ပညာရှင်များ...များစွာရှိပေသည်။။။။
အစုတ်မှအကောင်းသို့ ပြောင်းလဲနိုင်သော အတတ်ပညာရှင်များလည်း တဖက်မှပြန်လည်တိုးတက်လျှက် ရှိသည်။။။။။။
ကမ္ဘာကျော်အောင်မတော်...သော်လည်း...ပန်းချီအတတ်ပညာရှင် များလည်း များစွာရှိကြရာတွင်. ..နံရံဆေးေ၇း အတတ်တွင် နိုင်ငံသားတိုင်းတတ်ကြွမ်းကြရာတွင်။နီးစပ်ရာရေးခြစ်စရာများဖြင့် အရုပ်ထင်အောင်ပြုလုပ်ရာတွင်...ယောင်္ကျားလေးအိမ်သာတွင်းမှအနုပညာမြောက်လက်ရာ(စိတ်အစာပြေ)
ကွမ်းတံတွေမထွေးရ။ လက်မထုတ်ရခေါင်းမပြူရ။ ခါးပိုက်နှိုက်သတိပြု။ မေ့ကျန်ပစ္စည်းတာဝန်မယူ။ မိမိပစ္စည်းမိမိတာဝန်။ လူလိုသိပါ။ ဆန္ဒကိုသိက္ခာဖြင့်ထိမ်းပါ။ ခွေးများသာသေးပေါက်ရန်။ အမှိုက်မပစ်ရ။ လမ်းပိတ်ထားသည်။ဓါတ်ပုံဗွီဒီယိုမရိုက်ရ။ အစစ်ဆေးခံရန်ရပ်။တို့ဖြစ်ပြီး။။ရေးသော်ကုန်အံ့မထင်............
တွင်အေ၇းပါသောအချက်အားတင်ပြအံ့......စက်နှင့်ယာဉ်ပြင်အတတ်ပညာအား ယာဉ်များမြန်မာနိုင်ငံသို့ စတင်ဝင်ရောက်မှတ်ပုံတင်သည့် ..က/.... အက္ခရာမှသည်.ယနေ့..နောက်ဆုံးပေါ် မော်ဒယ် များအထိ ကြွမ်းကျင်စွာ ပြင်ဆင်နိုင်သောမက္ကင်းနစ်များရှိရာ ၄င်းပညာရှင်များ များပြားစေခြင်းငှာ. လမ်းမများအားချိုင့်ခွက်များ၊ အခုံးများ၊ အပေါက်အပြဲများဖန်တီးကာ...၄င်းမော်တော်ယာဉ်မျာအား လမ်းပေါ်မောင်းစေခြင်းဖြင့်ပျက်စီးစေကာ..ပြင်ဆင်မှုအတတ်ပညာအား..လူတိုင်တတ်မြောက်စေသည်။။။။
အကြားအမြင်ပညာရှင် လူကြီးမင်းများလည်း များစွားရှိကြပေသည်.၄င်းအကြားအမြင်လူကြီးမင်းများ မွေးထုတ်နိုင်ရန်ဆောင်ရွက်ရာတွင်. .အကြားအာရုံကောင်းစေရန်. ဟန်းဖုန်းများအား.. ဝေဖ်မမိအောင် ပြုလုပ်ထားပေးခြင်း. လိုင်းဖုန်းများအားလိုင်းပူးထားပေးခြင်းဖြင့် အာရုံစူးစိုက်စေလျှက် အကြားပညာရှင်များ ဖြစ်စေပါသည်။
လူကြီးမင်းများဖြစ်စေရန်အတွက်မူ ခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှ... “လူကြီးမင်းခေါ်ဆိုသောဖုန်းမှာ ဆက်သွယ်မှု ဧ၇ိယာပြင်ပသို့ ရောက်နေပါသည်”ဟုအကြိမ်ကြိမ် “လူကြီးမင်း” ဟုခေါ်စေလျှက်. လူအားလုံးအားလူကြီးမင်းများဖြစ်စေခြင်း။။။။
။အမြင်ပညာရှင်ဖြစ်စေရန်အတွက်မှု နေ့စဉ် .ကိုရီးယားဇာတ်လမ်းတွဲများ အား. တီဗွီတွင်နေ့စဉ်အကြိမ်ကြိမ် ပြသပေး ခြင်းဖြင့်၎င်း.......အမြင်ပညာရှင်များဖြစ်စေကာ..အားကျအတုယူစေခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွင်...
Posted by မိုးယံ at 12:19 PM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
made in myanmar...ပြင်ရင်းသစ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေရှိတယ်...ပျက်အစဉ် ပြင်လည်းခဏပဲ...ဟိဟိ
အဲဒါပဲ . . .အဲဒါပဲ . . .
ငါဖြင့်မပြောတာတောင်ကြာပေါ့..... စိတ်ကုန်လို့ 